देउवा र पौडेलबीच यसरी भयो सार्वजनिक मञ्चमै बाजाबाज (भिडियो रिपोर्ट) – Himalaya Television
देउवा र पौडेलबीच यसरी भयो सार्वजनिक मञ्चमै बाजाबाज (भिडियो रिपोर्ट)
२०७७ चैत २७ गते २०:४०
२७ चैत २०७७ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै बाझाबाझ भएको छ । ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप र बाझाबाझ भएको हो ।
भाषण सकेर मञ्चतर्फ लम्केका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सभापति शेरबहादुर देउवाले सिटमा नपुग्दै यसरी रोक्नुभयो ।
कुराकानीका क्रममा देउवा झोक्किनुभयो । पौडेल पनि त्यसरी नै झोक्किनुभयो र सोफामा बस्नुभयो । तर त्यसपछि पनि भनाभन रोकिएन ।
देउवा यसरी झोक्किनुको कारण थियो पौडेलको भाषण । जसमा पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन पहिले पाएको मौका चुनाव चुनाव भनेर गुमाएको भनेर देउवामाथि दोषारोपण गर्नुभएको थियो ।
पौडेलले चुनाव चुनाव भनेको भनेर आफ्नो विषयमा आपत्ति जनाएपछि झोक्किएका देउवाले आफ्नो पालोमा त्यसको जवाफ दिनुभयो । र, चुनाव जितिन्छ किन नजाने भनेर सोध्नुभयो । त्यतिमात्रै होइन सरकार बनाउन संख्या पुग्दैन कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न पनि उठाउनुभयो ।
पौडेलको आपत्ति देउवाले चुनाव भन्नुभयो भन्ने मात्रै थिएन, देउवाले ओली सरकार हटाउन पहल गर्नुभएन भन्ने आशय पनि व्यक्त गर्नुभयो र अरु दलसँगको छलफलमा लचिलो भएर विकल्पमा तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देउवाले पनि नाम ल्याउनोस भनेर पौडेललाई जवाफ फर्काउनुभयो ।
देउवा र पौडेलबीच सार्वजनिक रुपमै नयाँ सरकार गठन र चुनावका विषयमा भएको बाझाबाझले कांग्रेसभित्र सहज स्थिति र मतैक्यता नरहेको देखाउँछ ।
देउवा पौडेल सार्वजनिक
कहिलेबाट पस्यो सर्वोच्चमा सिंहदरबार र सिंहदरबारमा सर्वोच्च ?(भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ कार्तिक १० गते २०:३०
अष्टलक्ष्मी शाक्यः भूँईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि यसरी गुम्यो (भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ कार्तिक १० गते २०:२३
यसरी भन्द्रगोल बन्दै न्यायालय, ‘नैतिकता कुन चराको नाम ?’ (भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ कार्तिक १० गते २०:१७
कांग्रेस नेतृत्वको किचलोले पार्टी नै अवैध बन्ने बाटोमा (भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ कार्तिक १० गते २०:१२
घट्यो रेमिट्यान्स, मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा (भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ कार्तिक १० गते २०:०७
एमसीसी नेपालको हितमा छ, विरोध गर्नेहरूले सम्झौता अध्ययन नै गरेका छैनन्ः उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल (भिडियो कुराकानीसहित) २०७८ कार्तिक १० गते २०:०१
साफ उपविजेता नेपाली टोली नगदसहित सम्मानित २०७८ कार्तिक १० गते १९:३०